कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं ब्योहोर्नु निर्णयबारे मन्त्रालयबाट एस्तो आयो जवाफ - Esidhakahabr
Home समाचार कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं ब्योहोर्नु निर्णयबारे मन्त्रालयबाट एस्तो आयो जवाफ
कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं ब्योहोर्नु निर्णयबारे मन्त्रालयबाट एस्तो आयो जवाफ
काठमाडौं, मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं तिर्नुपर्ने निर्णयबारे प्रष्ट्याउँदै उपचारको क्रममा राज्यले पैसा हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने नीति अख्तियार गरेको जनाएको छ ।गत् असोज १९ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको कार्यान्वयन कात्तिक २ गतेबाट लागू हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले जनाएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले राज्यले पहिलो संक्रमित पुष्टि हुँदादेखि नै आफ्नै स्रोत साधनबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको बताउनुहुँदै हालसम्म करिब १२ लाख ब्यक्तिको परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।मन्त्रालयले राज्य कोषबाट उपचार हुने मापदण्ड समेत निर्धारण गरेको छ । जसमा एकल महिला, विपन्न, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई परिभाषित गरिएको छ ।प्रवक्ता डा. गौतमले भन्नुभयो, “उपचारको प्रक्रियालाई थोरै परिवर्तन गरिएको छ, क्षमता हुनेले खर्च तिर्ने र नहुनेलाई राज्य कोषबाट उपलब्ध गराइनेछ ।”
उहाँले थप्नुभयो, “असहाय, एकल महिला, अपाङ, अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापनमा सघाउ पुग्नेछ ।”प्रवक्ता डा. गौतमले राज्यकै कोषबाट एक लाख संक्रमितले उपचार गरिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । हालसम्म नेपालमा एक लाख ३६ हजार ३६ जना ब्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमितल भएका छन् । १३ लाख ९१८ जना ब्यक्तिले आरटीपीसीआर परीक्षण गराएका छन् ।
Previous articleआज मंगलवार २०७७ साल कार्तिक ३ गतेको राशीफल हेर्नुस : तपाईको आज धन, धर्म र भाग्य कत्तिको बलियो छ
Next articleकोरोना संक्रमण बढेपछि छठसम्मै कडिकडाउको तयारी